PSG iyo Liverpool ayaa u soo baxay wareega Quarter Finalka UEFA Champions League… – Hagaag.com
PSG iyo Liverpool ayaa u soo baxay wareega Quarter Finalka UEFA Champions League…
Posted on 11 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Barcelona ayaa macasalaamaysay koobka horyaalada Yurub kadib bar bar dhac 1-1 ah oo ay la gashay Paris Saint-Germain Arbacadii lugtii labaad ee tartanka, dhanka kale Liverpool ayaa ku guuleysatay inay u soo baxdo wareega Quarter Finalka kadib labo gool oo ay uga badisay Leipzig.
Paris Saint-Germain ayaa ka faa’iideysatay guushii weyneyd ee 4-1 oo ay ka gaartay kooxda Barcelona lugtii hore ee lagu qabtay garoonka Camp Nou bishii hore, waxay PSG ku soo baxday 5-2 wadar ahaan kulamadii koowaad iyo labaad, sidaasi ayey ugu soo baxday wareega Quarter Finalka.
Barcelona ayaa ku riyootay inay sidii kolkii hore isla tartankan sanadkii 2017 oo dhex maray PSG oo lugtii hore looga badiyey 4-0 garoonka PSG ayaa ku guuleysatay markii garoonkeeda lagu ciyaarayay inay ku xaaqdo 6-1, sidaasina ay ugu soo baxday wadar ahaan 6-5.
Beerta ‘Princes’ Park ee magaalada Paris, Barcelona ayaa waxay halkaasi ku muujisay awoodeeda, waxay heleen fursado badan oo goolal ay ku dhalin kareen, laakin waxaa u diiday goolhayaha reer Costa Rica Keylor Navas oo runtii ahaa qofka badbaadiyey kooxda, xataa wuxuu ka qabtay gool ku laad uu Messi tuuray.
Inkasta oo ay kooxda Barcelona gacanta ku haysay ciyaarta, kooxda Paris Saint-Germain ayaa ahayd kooxdii ugu horaysay ee goolka dhalisa iyada oo uu u dhaliyay xiddigooda da’da yar ee Kylian Mbappe daqiiqadii 30-aad taasoo aheyd rigoore.
Xiddiga reer Argentine Lionel Messi ayaa dhaliyay goolka barbaraha ee Barcelona daqiiqadii 37aad, ka hor inta uusan lumin rigoore.
Tani waa markii ugu horeysay ee ay Barcelona ku guuldareysato inay ka soo muuqato wareega 8da Champions League tan iyo xilli ciyaareedkii 2006/2007, iyadoo rajo laga qabay inay horay u socoto, maadaama horey 5 jeer loogu caleemo saaray iyagoo ku hoos jira madaxweynahooda Joan Laporta, oo mar labaad ku soo noqday hogaaminta Naadiga kadib markii uu ku guuleystay doorashadii la qabtay Axaddii la soo dhaafay.
Dhinaca kale, Liverpool ayaa iska tirtirtay siigada dhibaatadeeda horyaalka gudaha waxayna u soo baxday Quarter-finalka Champions League.
Liverpool ayaa ugu mahadcelinaysaa goolasha xiddigaha Mohamed Salah iyo Sadio Mane, daqiiqadihii 70 iyo 74 ka dib qeybtii hore ee ciyaarta oo ku dhamaatay barbaro goolal la’aan ah.
Liverpool ayaa labada kulan ku badisay 4-0 wadar ahaan.
Ciyaarta ayaa lagu qabtay garoonka Puskas Arena ee caasimada Hungary ee Budapest, kaas oo martigaliyay ciyaartii lugtii hore ee labada koox, iyadoo la tixraacayo xayiraadaha safarka iyo habraacii lagu dabaqay Jarmalka sababo la xiriira faafida viruska Corona.